FIKAMBANANA TMH MORAMANGA : Vonona hanampy an’i Andry Rajoelina amin’ny fanatanterahana ny IEM
Maneho ny fahavonany tanteraka amin’ny fandrasaina anjara ho amin’ny fampandrosoana ny firenena ny fikambanana Tmh na ny Tanora Miandrandra ny Hoavy. 12 février 2018
Ho azy ireo dia laharam-pahamehana ny hamoahana an’i Madagasikara ao anatin’izao fahantrana lalina mianjady amin’ny vahoaka malagasy izao. Vonona ny hanohana sy hanampy hatramin’ny farany ny filohan’ny tetezamita teo aloha, Andry Rajoelina ny fikambanana ary vonona ihany koa ny hiara-hiasa amin’ity farany amin’ny fanatanterahana an’ilay vinan’ny fampandrosoana ho an’ny fisandratan’i Madagasikara na ny Iem, izay novolavolainy mba hanavotana ny firenena. Nisongadina io nandritra ny fihaonam-ben’ireo tanora Tmh tao Moramanga ny faran’ny herinandro lasa teo iny.
Araka ny fantatra dia iharan’ny sakantsakana sy antsojay ataon’ireo mpitondra fanjakana ao an-toerana ity fikambanana ity kanefa tsy nataon’izy ireo ho sakana amin’ny fanatanterahana ireo asa sosialy marobe sahaniny izany, ary nataon’izy ireo sakana ho amin’ny fampitomboana ireo tanora mpikambana ihany koa. Tamin’io fihaonam-be io no nohararaotin’ireo mpikambana nifampaherezana manoloana io zava-mitranga iainan’izy ireo io. Nanakoako tao anatin’ilay efitrano nanaovana ny fihaonana fa « tsy hihemotra izy ireo manoloana ny endrika sakantsakana rehetra ataon’ny mpitondra fanjakana ao Moramanga ».
Amin’ny ankapobeny dia vina napetrak’ireo tanora Tmh manerana ny Nosy ny hanavotana ny firenena. Ho an’izy ireo dia lalana tokana ihany no ahafahana mivoaka ao anatin’izany dia tsy misy afa-tsy ny fampandaniana an’izay olona heverin’izy ireo fa hahavita hanarina indray ireo lesoka rehetra eto amin’ny firenena. Tafiditra ao anatin’izany ny ady amin’ny kolikoly, ny fisian’ireo tsy matimanota, ny tsy fananan’asa ho an’ny tanora sy ny fidangan’ny vidim-piainana.
Araka ny fanazavan’ireo mpikambana dia “mitovy fijery ary manana vina iraisana aminy ny filoha Andry Rajoelina izay vonona hanampy sy hanome tosika ireo madinika ka izany no antony anohanan’izy ireo azy”. Miray feo araka izany ireo mpikambana ary mangataka tsy misy fepetra ny filohan’ny tetezamita, Andry Rajoelina mba ho isan’ireo hilatsaka hofidiana ho Filoham-pirenena amin’ity taona 2018 ity.